Edhisheni timu | Kudya kweNutri
Kudya kweNutri ndeweSpanish webhusaiti yakanangana nekuvandudza iyo kudya, hutano uye kugwinya yevashandisi vayo vese. Iyo yakavambwa muna 2007, nekudaro ichiumba mukurumbira unochengetedzwa nekuda kwedu Chikwata chekunyora iyo, kugovana iwo iwo maitiro uye misimboti, inogadzira zvemukati zvemukati vhiki nevhiki.
Kana iwe uchifarira Joinha timu yedu yevanyori uine ruzivo, unogona zadza fomu rinotevera y tichaonana newe asap.
Kana iwe uchida kuona ese misoro yatakanyora pamusoro pemakore uye tanga kuvandudza hupenyu hwako izvozvi, iwe unogona kutarisa iyo peji peji.
Mushonga wepanyama uye anofarira chikafu anofarira, ndinoda kubatsira vanhu kurarama hupenyu hune hutano. Nokubatanidza kudya kwakakodzera uye kurovedza muviri, zvinokwanisika kuita pane zvaunogona zuva rega rega, uye pamusoro pezvose, kuve unofara zvakanyanya.
Ini ndinoda kutarisa zvinovaka muviri, kugwinya uye hunhu hwechikafu kwete zvekugadzirisa dambudziko asi nemararamiro angu ndeangu. Kumba kwedu takaratidzwa nzira yekudya kwakanaka kubva pazera diki kwazvo, uko mhando yakapihwa mubairo kupfuura zvimwe zvese. Naizvozvo kufarira kwangu kukuru gastronomy uye hunhu hwakanaka hwechikafu zvakamuka. Kusvika nanhasi ndinogara kumaruwa, ndichifadzwa nemweya wese wekufema apo ini ndichikuudza nemufaro zvese zvaunoda kuziva nezve kudya, chikafu chakanaka uye mishonga yechisikigo.
Ndakazvarwa muMalaga mu1965, uye ini ndine shungu nenyika yekudya zvinovaka muviri, uye hutano hwepanyama. Kudya kwakakosha kuti ugone kurarama hupenyu hune hutano, ndosaka ndichifarira kuve neruzivo rwechikafu uye chikafu, sezvo ndichigona kupa rairo iri nani.